Bit By Bit - Introduction - 1.5 Tsanangudzo yebhuku rino
Bhuku rino rinopfuurira kuburikidza nevana zvakakosha kutsvakurudza maitiro: kuona maitiro, kubvunza mibvunzo, kuedza kuedza, nekugadzira masangano akawanda. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvinoda hukama hwakasiyana pakati pevatsvakurudzi nevatori vechikamu, uye imwe neimwe inoita kuti tikwanise kudzidza zvinhu zvakasiyana. Izvi zvinoreva, kana tikabvunza vanhu mibvunzo, tinogona kudzidza zvinhu zvatisingagoni kudzidza kuburikidza nekucherechedza maitiro. Saizvozvowo, kana tikamhanya miedzo, tinogona kudzidza zvinhu zvisingakwanisi kuburikidza nokucherechedza maitiro uye kubvunza mibvunzo. Pakupedzisira, kana tikashanda pamwe nevatori vechikamu, tinogona kudzidza zvinhu zvatisingagoni kudzidza kuburikidza nekuzvicherechedza, kuvabvunza mibvunzo, kana kuinyora mukuedza. Aya mazano mana akashandiswa mune imwe nzira makore makumi mashanu adarika, uye ndine chivimbo chokuti vose vacharamba vachishandiswa mune imwe nzira makore makumi mashanu kubva ikozvino. Mushure mokupa chitsauko chimwe kune imwe neimwe nzira, kusanganisira nyaya dzakanaka dzakasimudzwa nenzira iyoyo, ini ndichapa chitsauko chakakwana chekutsika. Sezvinorondedzerwa muChangamutauri, ndichaenda kunongedza hurukuro huru yezvitsauko zvakachena sezvinobvira, uye chimwe nechimwe chezvitsauko chichapedza nechikamu chinonzi "Chii chaunofanira kuverenga chinotevera" chinosanganisira mazano ezvinyorwa zvebhaibheri uye zvinyorwa zvinowedzera zvinhu.
Kutarisa mberi, muchitsauko 2 ("Kucherechedza maitiro"), ndicharondedzera kuti sei vatsvakurudzi vangadzidze sei pakucherechedza maitiro evanhu. Kunyanya, ndichafunga nezvemashoko makuru ezvisikwa akasika nemakambani nehurumende. Abstracting kubva pane zvinyorwa zvepi zvayo, ndinotsanangura zvinowanzoonekwa zvemashoko makuru ezvinyorwa uye kuti izvi zvinokanganisa sei vatsvakurudzi kukwanisa kushandisa zvinyorwa izvi zvekutsvakurudza. Zvadaro, ndichafananidza nzira dzekutsvakurudza zvitatu dzinogona kushandiswa kuti dzibudirire dzichidzidza kubva kune makuru makuru emvura.
Muchitsauko 3 ("Kumbira mibvunzo"), ini ndichatanga nekuratidza izvo vatsvakurudzi vanogona kudzidza kuburikidza nepamusoro pepreexisting data huru. Kunyanya, ndicharatidza kuti kuburikidza nekubvunza vanhu mibvunzo, vatsvakurudzi vanogona kudzidza zvinhu zvavasingakwanisi kudzidza nekungoona maitiro. Kuti urongedze mikana yakagadzirwa nezera rechidijita, ini ndichadzokorora mhemberero yenyika yekuongororwa kukanganisa. Zvadaro, ndicharatidza kuti nguva yechidijiti inobatsira sei nzira itsva kune zvose zvidzidzo uye kubvunzurudza. Pakupedzisira, ndicharondedzera mazano maviri ekubatanidza dheta rekuongorora uye makuru makuru emvura.
Muchitsauko 4 ("Running experiments"), ini ndichatanga nekuratidza izvo vatsvakurudzi vanogona kudzidza pavanenge vachitamira kunze kwekucherechedza maitiro uye kubvunza mibvunzo yekuongorora. Kunyanya, ini ndicharatidza maitiro ekuongororwa akaongororwa--kuti muongorori anopindira munyika nenzira chaiyo-ipai vatsvakurudzi kudzidza pamusoro pehukama hwehukama. Ini ndichaenzanisa maitiro ezvidzidzo zvatingaita munguva yakapfuura nemhando dzatinogona kuita iye zvino. Nezvo zvakaitika, ndicharondedzera kushambadzira kunobatanidzwa mune mazano makuru ekuitisa zvidzidzo zvemadhigiri. Pakupedzisira, ndichagumisa nemamwe mazano mazano pamusoro pekuti iwe unogona kushandisa sei simba rekutsvaga kwedhijitori, uye ini ndicharondedzera mamwe emabasa anouya nesimba iroro.
Muchitsauko 5 ("Kuumba kubatana kukuru"), ndicharatidza kuti vatsvakurudzi vanogona sei kugadzira masangano akawanda-akadai sevanhu vakawanda uye svesayenzi-kuti vaite zvitsvaga zvevanhu. Nokurondedzera kubudirira kwemapurani ekubatana pamwe nekupa mashoma masangano ekugadzirisa mazano, ndinotarisira kukukurudzirai zvinhu zviviri: kutanga, kuti kubatana kukuru kwevanhu kunogona kushandiswa kwekutsvakurudza kwevanhu, uye chechipiri, kuti vatsvakurudzi vanoshandisa kubatana kukuru vachakwanisa kugadzirisa matambudziko akanga aimboita seasingabviri.
Muchitsauko 6 ("Maitiro"), ini ndichataura kuti vatsvakurudzi vanowedzera simba pamusoro pevatori vechikamu uye kuti izvi zvinokwanisa kuchinja nokukurumidza kupfuura mitemo yedu, mitemo, nemitemo. Iko kusanganiswa kwesimba rinowedzera nekushaiwa kwechibvumirano pamusoro pekuti simba iro rinofanira kushandiswa rinosiya sei vanotsvakurudza vanofunga mumamiriro ezvinhu akaoma. Kuti ndigadzirise dambudziko iri, ini ndichataura kuti vatsvakurudzi vanofanira kutora mazano-based approach. Izvi zvinoreva kuti vatsvakurudzi vanofanira kufungisisa kutsvakurudza kwavo kuburikidza nemitemo iripo-yandichazotora-uye kuburikidza nemitemo yakawanda yemitemo. Ini ndichatsanangura mazano mana akaiswa uye maitiro maviri emitemo anogona kubatsira kutungamirira zvisarudzo. Pakupedzisira, ini ndichatsanangura mimwe mitemo yemitemo iyo ini ndinotarisira kuti vanotsvakurudza vachatarisana mune ramangwana, uye ini ndichapa mazano anobatsira ekushanda munzvimbo ine tsika dzisina kugadzikana.
Pakupedzisira, muchitsauko 7 ("Remangwana"), ndichadzokorora zvinyorwa zvinopinda kuburikidza nebhuku, uye zvino vashandise kuti vafungidzire nezvemashoko achave anokosha mune ramangwana.
Tsvakurudzo yezvemagariro evanhu mumakore ekugadzira huchabatanidza izvo zvatakaita munguva yakapfuura nemasimba akasiyana ehupenyu hweramangwana. Nokudaro, tsvakurudzo yezvemagariro evanhu ichaumbwa nevose masayendisiti nesayenzi masayendisiti. Boka roga roga rine chimwe chinhu chokupa, uye mumwe nomumwe ane chimwe chinhu chokudzidza.